बेड छ उपकरण छैन, भवन छ डाक्टर छैनन् तारकेश्वरको आइसोलेसनमा - Open Khabar - नेपाली अनलाइन डिजिटल पत्रिका
बेड छ उपकरण छैन, भवन छ डाक्टर छैनन् तारकेश्वरको आइसोलेसनमा
तारकेश्वर, १९ भदौ । तारकेश्वर नगरपालिकाले कोभिड नियन्त्रणको शिलशिलामा सांग्लामा आइसोलेसनका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन तयार पारेपनि सुरु हुन भने सकेको छैन ।
आइसोलेसनका लागि स्थान र शैयाहरु तयार गरेपनि संक्रमितलाई परीक्षण र उपचार गर्ने सामान्य उपकरणहरु समेत नहुँदा आइसोलेसन सुरु गर्न नसकिएको हो । आइसोलेसनमा रहेका सिअहेव सकिल अलिले आवश्यक पर्ने सामानहरुको माग नगरपालिकामा पठाइसकेको जानकारी दिए । आइसोलेसनमा बिरामीको अक्सिजन तह जाँच्ने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन थेरापी दिनका लागि पल्स अक्सिमिटर लगायत उपकरण नगरपालिकासँग माग गरिएको छ । यसका साथै आइसोलेसनका लागि थप बेड, ब्लक पार्टेसन (संक्रमितलाई छुट्याएर राख्न) पनि माग गरिएको छ । संक्रमित बिरामीका लागि प्रयोगमा आएका औषधिहरु पनि माग गरिएको सिअहेव अलिले बताए ।
साथै आइसोलसन केन्द्रमा जम्मा १४ वटामात्र अस्पताल शैया रहेको छ । तर, नगरले सो भवनमा तत्काल ५० शैया चलाउने गरि भुइँमा समेत ओछ्यान लगाएको छ । अस्पतालमा रहेको ल्याव बाहेक अन्य उपकरण र सेवाहरु वडा नं १ को कार्यालयमा सारिएपछि आइसोलेसन केन्द्रमा सामान्य ल्यावमात्र उपलब्ध छ । तर, सो ल्यावमा पीसीआर परीक्षण भने हुँदैन ।
आइसोलेसन केन्द्रमा आवश्यक सामानको सूचि नगरपालिकामा आइसकेको र त्यसको खरिद प्रकृया अघि बढिसकेको नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद लम्सालले तारकेश्वर अनलाईनलाई जानकारी दिए ।
भएका डाक्टरको म्याद सकियो, विभागसँग नयाँ डाक्टर माग
अफ्ठ्यारो खालको संयोग के परेको छ भने सांग्ला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आइसोलेसन सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा नगरपालिका डाक्टरविहीन हुन पुगेको छ । केन्द्रमा २ वर्षे सेवामा कार्यरत २ जना एमबीबीएस डाक्टरको अवधि सकिएपछि सांग्ला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकविहीन हुन पुगेको हो । नगरमा यसअघि कार्यरत डा. नीतु लिम्बूको भदौ १२ गते र डा. प्रकृति मिश्रको भदौ १७ गते पदावधि सकिएपछि चिकित्सक विहीन भएको हो ।
आइसोलेसन केन्द्र र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि समेत भनेर स्वास्थ्य सेवा विभागसँग चिकित्सक माग गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लम्सालले जानकारी दिए ।
हाल आइसोलेसन केन्द्रमा २ जना सिअहेव, एकजना हेल्थ असिस्टेन्ट र दुईजना अनमी रहेका छन् । उनीहरुले मात्र न त आइसोलेसन चलाउन सक्छन् न त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नै । आइसोलेसन केन्द्रमा हालसम्म एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गरिएको छैन । यद्यपी एम्बुलेन्सका हकमा भने नगरपालिकाको निःशुल्क एम्बुलेन्स प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ ।
covid 19तारकेश्वरतारकेश्वर नगरपालितारकेश्वर नगरपालिकाफिचर